सामसुङ ग्यालेक्सी ए ७० : सबैभन्दा ठूलो डिस्प्ले भएको मोबाइल | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि सामसुङ ग्यालेक्सी ए ७० : सबैभन्दा ठूलो डिस्प्ले भएको मोबाइल
काठमाडौं । सामसुङ ग्यालेक्सी ए ७० को डिस्प्ले ६ दशमलव ७ इन्च छ । यही कारण यो सबैभन्दा ठूलो डिस्प्ले भएको स्मार्टफोन बनेको छ । यसमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले राखिएको छ । ठूलो डिस्प्ले भएकाले कलर रिप्रडक्शन, भ्युइङ एंगल, डिटेलिङका भएकाले फोन फिल्म तथा भिडियो हेर्न गज्जब हुन्छ । फोनको अगाडिको भागमा डिस्प्लेको सुरक्षाका लागि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास ३ को प्रोटेक्शन दिइएको छ ।
यसको सेल्फी क्यामेरा र अगाडिको क्यामेराको क्षमता समान ३२ मेगापिक्सेलको छ । पछाडि तीनओटा क्यामेरा राखिएका छन् । ३२ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा अल्ट्रा वाइडका लागि ८ र डेफ्थका लागि ५ मेगापिक्सेलको क्यामेरा राखिएको छ । ३२ मेगापिक्सेलसहितको शक्तिशाली ट्रिपल रियर क्यामेरा छ, जसले शानदार सुपर स्लो मो भिडियो शुट गर्न सक्षम छ । १२३ डिग्रीको कोणमा फोटो खिच्न सकिने हुँदा यस फोनबाट प्रयोगकर्ताले अल्ट्रा वाइड तस्वीर तथा भिडियो लिन सक्छन् । ५ मेगापिक्सलको डेप्थ लेन्सले प्रयोगकर्तालाई प्रभावशाली तस्वीर लिने क्षमता प्रदान गर्दछ । यसमा भएको लाइभ फोकस फिचरले फोटो खिच्दै गर्दा वा फोटो खिचिसकेपछि फिल्डको डेप्थलाई मिलाउन सकिने क्षमता प्रदान गर्दछ ।
यसको ब्याट्री ४५०० एमएचको राखिएको छ । ब्याट्रीसमेत छिटो चार्ज हुने गरी बनाइएको छ । यसमा भएको शक्तिशाली ब्याट्रीले पूरै दिन शेयर, भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ ।
ग्यालेक्सी ए ७० मा सामसुङको इन्टेलिजेन्ट सीन अप्टिमाइजर पनि छ, जसले २० मोडहरूमा एक सिनको विश्लेषण गरी इमेज क्वालिटीलाई तुरुन्त अप्टिमाइज गरी कलर, कन्ट्र्यास्ट तथा ब्राइटनेशलाई स्वतः मिलाउनेछ । सेल्फी लिन रुचाउने ग्राहकका लागि यस फोनमा ३२ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा छ । यसमा प्रयोगकर्ताले एआर इमोजी तथा सेल्फी फोकसजस्तो फिचरको उपयोग गरी आफैले जीवन्त रूपमा साथीभाइमाझ कनेक्ट गर्ने मौका प्रदान गर्दछ ।
इमर्सिभ भ्युइङ एक्स्पेरियन्स
थप मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ग्यालेक्सी ए ७० मा प्रिमियम ६ दशमलव ७ इन्चको फूलएचडी प्लस इन्फिनिटी यू डिस्प्ले तथा वाइडभाइन एल१ सर्टिफिकेशनले प्रयोगकर्तालाई सही एचडी कन्टेन्ट स्ट्रिमिङको अवसर प्रदान गर्दछ । सामसुङको आफ्नै सुपर एमोलेड प्रविधिले डिस्प्लेलाई जीवन्त बनाई स्ट्रिमिङको बेग्लै मजा प्रदान गर्दछ । ग्यालेक्सी ए ७० मा रहेको डल्बी एटमोसले ३६० डिग्रीको सराउन्डिङ साउन्डको अनुभव प्रदान गर्दछ ।
ग्यालेक्सी ए ७० अक्टाकोर क्वालकम स्न्याप ड्र्यागन ६७५ प्रोसेसरको साथ उपलब्ध छ । यसले सहजै जस्तोसुकै कार्य छिटो गर्दछ । प्रभावशाली क्यामेरा, इमर्सिभ डिस्प्लेको साथ ग्यालेक्सी ए ७० ले विन्ज वाचर तथा मोबाइल फोनका पारखीहरूलाई निश्चय नै आकर्षित गर्दछ । यसमा भएको ६ जीबी र्‍यामले मल्टिटास्किङको अनुभवलाई सहजता प्रदान गर्दछ । यसमा एन्ड्रोइड पाइमा आधारित सामसुङ यूजर इन्टरफेस छ । यो फोनलाई १ हातमा सहजै लिन सकिन्छ ।
शक्तिशाली ४५०० एमएएच ब्याट्रीले गर्दा मोबाइल फोन २ दिन सहजै चल्न सक्छ । २५ वाटको सुपर फास्ट चार्जिङ प्रविधि तथा यूएसबी टाइप सी पोर्टको साथ उपलब्ध ग्यालेक्सी ए ७० ले प्रयोगकर्तालाई पूरै दिन कनेक्ट रहन मद्दत गर्दछ ।
मूल्य ४८ हजार
ग्यालेक्सी ए ७० को मूल्य नेपाली बजारमा ४७ हजार ९९० रुपैयाँ छ । मोबाइलको पछाडिपट्टिको भागमा ग्लास फिनिसिङयुक्त पोलिकार्बोनेट बडी राखिएको छ । झट्ट हेर्दा यो भाग शिशाको जस्तै देखिए पनि वास्तवमा यो प्लास्टिक नै हो, जसले ग्रेडियन्ट इफेक्टसमेत दिन्छ । यो सामसुङकै ग्यालेक्सी ए ५० को जस्तै देखिन्छ । प्रयोगकर्तालाई यो फोन हातमा राख्दा मोबाइल प्रिमियम देखिने मात्र होइन, त्यसको अनुभवसमेत हुनेछ । करीब १ सय ८३ ग्राम वजनको यो फोन केही पातलो भने लाग्नेछ ।
फोनको तल्लो भागमा ३ दशमलव ५ एमएम ज्याक, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन र स्पिकर राखिएको छ । दुईओटा सिम कार्ड राख्न मिल्ने यो मोबाइलमा २ सिमकार्ड तथा एउटा मेमोरी कार्ड लाग्ने सिमस्लट दिइएको छ । दायाँ भागमा भोल्युम बटन र पावर बटन राखिएको छ । माथिल्लो भागमा न्याइज क्यान्सेलिङ माइक छ । मोबाइलको स्पिकरको आवाज निकै ठूलो छ ।
मोबाइलमा ११ नानोमिटर अक्टाकोर प्रोसेसरयुक्त क्वालकम स्नापड्र्यागन ६७५ शक्तिशाली प्रोसेसर राखिएको छ, जुन दुई दशमलव गिगाहर्जमा छ । अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको यो फोनमा ६ जीबीको ¥याम प्रयोग गरिएको छ । यो ग्यालेक्सी ए सिरिजहरूमध्ये पाँचौं स्मार्टफोन हो । ग्यालेक्सी ए ७० मा २५ वाटको सुपर फास्ट चार्जिङ फिचर पनि छ । फोनमा निकै नै परिष्कृत एन्ड्रोइड ९ मा आधारित सामसुङको १ यूआई रहेको छ ।
Malai yo kura man pareko chha! Sayad future ma kinne soch liula! Aile lai merai ma sanga vako device nai usamla!
Thank admin for this update !!!